Facebook က ဘယ်လို ID အမျိုးအစားတွေကို Accept လုပ်သလဲ? | Online Service Center Myanmar -->
Facebook က ဘယ်လို ID အမျိုးအစားတွေကို Accept လုပ်သလဲ?
Facebook Account ​တွေ တစ်​ခုခုဖြစ်​ခဲ့ရင်​ ID တင်​ Confirm လုပ်​ပြီး ပြန်​ယူရပါတယ်​။ ဘယ်​လို ID ​တွေကို Accept လုပ်​လည်​းသိဖို့ ​လေ့လာပါ။
Facebook တွင် မည်သည့် ID အမျိုးအစားများကို လက်ခံသနည်း။
သင့်အမည်ကို Facebook တွင် အတည်ပြုရန် လိုအပ်လျှင်၊ (သို့) သင့်အကောင့်ထဲ ဝင်ခွင့်ဆုံးရှုံးလျှင်၊ သင့်အမည်ပါရှိသည့် အထောက်အထားတစ်ခုခု၏ ကော်ပီကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပို့ပေးရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ဤအတွက်ဆိုလျှင် သင့်၌ အစိုးရထုတ် ဓာတ်ပုံ ID များ၊ အစိုးရမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများမှ ID များ၊ မဂ္ဂဇင်းစာရင်းသွင်းပုံစံ (သို့) မေးလ်တစ်ခုခုကဲ့သို့ သင့်အမည် (သို့) အခြား ကိုယ်ရုပ်အစိတ်အပိုင်းများပါသော တရားဝင်ဆာတီဖီကိတ်များ (သို့) လိုင်စင်များ အပါအဝင် အခြားရွေးစရာများ ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သင့်အမည် (သို့) အိုင်ဒီအချက်အလက်အား အတည်ပြုသည့် အရာတစ်ခုခုကို ပို့လာတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့ရန် မလိုအပ်သော ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်တိုင်းကို ဖုံးကွယ်ထားပါ (ဥပမာ- ခရက်တစ်ကဒ်နံပါတ်၊ လူမှုလုံခြုံရေးနံပါတ်။) ကျွန်ုပ်တို့သည် Facebook နှင့် ချိတ်ဆက်နေသူလူတိုင်းကို မူရင်းပါပုံစံဖြင့် ကုဒ်ခံသိမ်းထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ဆီ သင်ပို့လာသည့် အရာရာတိုင်းကို သင့်အမည်နှင့် အိုင်ဒီအချက်အလက်ကို အတည်ပြုပြီးလျှင် ဖျက်ပစ်ပါမည်။
သင် ID တစ်ခု ပေးသွင်းသောအခါ Facebook က သင့်အချက်အလက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုနှင့် လုံခြံုရေး တို့အား ကာကွယ်ပေးသောပုံစံနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်ကို နောက်ထပ်လေ့လာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အုပ်စုတစ်ရှိ အိုင်တမ်များထံမှ တစ်ခုကို သင့်အမည်အား အတည်ပြုရန် (သို့) သင့်အကောင့်ထဲ ပြန်သွားရန်အတွက် ပို့ပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံ သင်ပို့လာသည့် အရာရာတိုင်းတွင် သင့်အမည်နှင့် မွေးနေ့ဖြစ်စေ (သို့) သင့်အမည်နှင့်ဓာတ်ပုံဖြစ်စေ ပါရှိရမည်။
2. ယာဉ်မောင်းသူ၏ လိုင်စင်။
5. တရားဝင်အမည်ပြောင်း ရုံးစာ။
6. ပုဂ္ဂလိကအာမခံကတ် (သို့) ယာဉ်အာမခံကတ်။
7. ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မဟုတ်သော အစိုးရထုတ် ID (ဥပမာ- မသန်မစွမ်းဖြစ်နေမှု၊ SNAP ကတ်၊ အမျိုးသာ ID ကတ်၊ ပင်စင်ကတ်)။
8. နိုင်ငံသားစိစစ်ခံကတ်၊ နေထိုင်ခွင့်ရပါမစ် (သို့) လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထောက်ခံစာ။
9. မျိုးနွယ်စု သက်သေခံကတ် (သို့) နေထားပုံစံပြကတ်။
10. မဲပေး ID ကတ်။
14. လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး မှတ်ပုံတင်ကတ်။
အကယ်၍ သင့်၌ အုပ်စုတစ်မှအရာများ မရှိလျှင်၊ အုပ်စုနှစ်ရှိ အိုင်တမ်များမှ မတူသော နှစ်ခုကို ပို့ပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ပ်တို့အတွက် သင်ပို့လိုက်သည့် အိုင်တမ်များပေါ်ရှိအမည်သည် သင့်ပရိုဖိုင်ပေါ်၌ ပြထားသော အမည်နှင့် တူနေရမည်။
အကယ်၍ သင့်အကောင့် ပျောက်ဆုံးသွားလျှင်၊ သင့် Facebook ပေါ်က အသေးစိတ်များဖြင့် ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ (သို့) မွေးနေ့ကို ပြသထားတဲ့ စာရင်းမှ တစ်ခုခုကိုလည်း ပေးရန် သင့်အား တောင်းဆိုနိုင်သည်ကို စိတ်ထဲမှတ်ထားပေးပါ။ ဒါဟာ ပုံမှန်အနေအထားထက် သတိထားရန်ဖြစ်သဖြင့် သင့်အကောင့်ထဲ ဝင်ခွင့်ရှိသည့် အရာတစ်ခုကိုသာလျှင် သေချာအောင် ကျွန်ုပ်တို့က ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
25. အဖွဲ့ဝင် ID (ဥပမာ- ပင်စင်ကတ်၊ ယူနီယမ်အဖွဲ့ဝင်၊ အလုပ်သမား ID၊ သက်မွေးကျွမ်းကျင်အလုပ် ID)။
28. စာသင်ကျောင်း ID ကတ်။
32. နှစ်ချုပ်ဓာတ်ပုံ (သင်၏နှစ်ချုပ်စာစောင်ထဲရှိ စာမျက်နှာကိုဖတ်ထားသော စကင်စာမျက်နှာအမှန် (သို့) ဓာတ်ပုံအမှန်)။
38. တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုစာလွှာ (သို့) ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အတွက် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ဆာတီဖီကိတ်။
<< Zawgyi Version >>
Facebook တွင် မည်သည့် ID အမျိုးအစားများကို လက်ခံသနည်း။
သင့်အမည်ကို Facebook တွင် အတည်ပြုရန် လိုအပ်လျှင်၊ (သို့) သင့်အကောင့်ထဲ ဝင်ခွင့်ဆုံးရှုံးလျှင်၊ သင့်အမည်ပါရှိသည့် အထောက်အထားတစ်ခုခု၏ ကော်ပီကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပို့ပေးရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ဤအတွက်ဆိုလျှင် သင့်၌ အစိုးရထုတ် ဓာတ်ပုံ ID များ၊ အစိုးရမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများမှ ID များ၊ မဂ္ဂဇင်းစာရင်းသွင်းပုံစံ (သို့) မေးလ်တစ်ခုခုကဲ့သို့ သင့်အမည် (သို့) အခြား ကိုယ်ရုပ်အစိတ်အပိုင်းများပါသော တရားဝင်ဆာတီဖီကိတ်များ (သို့) လိုင်စင်များ အပါအဝင် အခြားရွေးစရာများ ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သင့်အမည် (သို့) အိုင်ဒီအချက်အလက်အား အတည်ပြုသည့် အရာတစ်ခုခုကို ပို့လာတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့ရန် မလိုအပ်သော ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်တိုင်းကို ဖုံးကွယ်ထားပါ (ဥပမာ- ခရက်တစ်ကဒ်နံပါတ်၊ လူမှုလုံခြုံရေးနံပါတ်။) ကျွန်ုပ်တို့သည် Facebook နှင့် ချိတ်ဆက်နေသူလူတိုင်းကို မူရင်းပါပုံစံဖြင့် ကုဒ်ခံသိမ်းထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ဆီ သင်ပို့လာသည့် အရာရာတိုင်းကို သင့်အမည်နှင့် အိုင်ဒီအချက်အလက်ကို အတည်ပြုပြီးလျှင် ဖျက်ပစ်ပါမည်။
သင် ID တစ်ခု ပေးသွင်းသောအခါ Facebook က သင့်အချက်အလက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုနှင့် လုံခြုံရေး တို့အား ကာကွယ်ပေးသောပုံစံနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်ကို နောက်ထပ်လေ့လာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အုပ်စုတစ်ရှိ အိုင်တမ်များထံမှ တစ်ခုကို သင့်အမည်အား အတည်ပြုရန် (သို့) သင့်အကောင့်ထဲ ပြန်သွားရန်အတွက် ပို့ပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံ သင်ပို့လာသည့် အရာရာတိုင်းတွင် သင့်အမည်နှင့် မွေးနေ့ဖြစ်စေ (သို့) သင့်အမည်နှင့်ဓာတ်ပုံဖြစ်စေ ပါရှိရမည်။
8. နိုင်ငံသားစိစစ်ခံကတ်၊ နေထိုင်ခွင့်ရပါမစ် (သို့) လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထောက်ခံစာ။
အကယ်၍ သင့်၌ အုပ်စုတစ်မှအရာများ မရှိလျှင်၊ အုပ်စုနှစ်ရှိ အိုင်တမ်များမှ မတူသော နှစ်ခုကို ပို့ပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ပ်တို့အတွက် သင်ပို့လိုက်သည့် အိုင်တမ်များပေါ်ရှိအမည်သည် သင့်ပရိုဖိုင်ပေါ်၌ ပြထားသော အမည်နှင့် တူနေရမည်။
အကယ်၍ သင့်အကောင့် ပျောက်ဆုံးသွားလျှင်၊ သင့် Facebook ပေါ်က အသေးစိတ်များဖြင့် ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ (သို့) မွေးနေ့ကို ပြသထားတဲ့ စာရင်းမှ တစ်ခုခုကိုလည်း ပေးရန် သင့်အား တောင်းဆိုနိုင်သည်ကို စိတ်ထဲမှတ်ထားပေးပါ။ ဒါဟာ ပုံမှန်အနေအထားထက် သတိထားရန်ဖြစ်သဖြင့် သင့်အကောင့်ထဲ ဝင်ခွင့်ရှိသည့် အရာတစ်ခုကိုသာလျှင် သေချာအောင် ကျွန်ုပ်တို့က ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
38. တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုစာလွှာ (သို့) ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အတွက် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ဆာတီဖီကိတ်။
Photo Post -
မူရင္​း Link => fb.com/help/159096464162185/?ref=cr